Andalusia को यात्रा र बस्न को लागी कारणहरु | यात्रा समाचार
Andalusia को यात्रा र बस्न को लागी कारणहरु
कारमेन गुइलन | | Almeria, स्पेन शहरहरू, कोर्डोबा, Granada, Huelva, मैलेंगा, sevilla
सबैजना, को को र को कम, हामीसँग एक ठाउँ छ जुन हामी समय-समयमा भाग्न चाहन्छौं। हामी यी ठाउँहरूलाई हाम्रो "अभयारण्यहरू" भन्छौं, जहाँ हामी हाम्रो ब्याट्री चार्ज गर्दछौं जब हामीसँग आधा वा लगभग खाली छ। तिनीहरू ती ऊर्जाका कुनाहरू जस्ता छन् जसले हामीलाई शान्ति सार्दछन्, जसमा हामी सँधै फर्कन चाहन्छौं र यदि हामी सक्दछौं भने हामी रहन चाहन्छौं र कुनै हिचकिचाहट बाँच्न सक्छौं।
मसँग निश्चित रूपमा म ती स्थानहरू मध्ये एक हो, र भाग्यवश मेरा लागि, यो दुबै मेरो जन्म स्थान र मेरो निवास स्थानसँग मिल्दछ: Andalusia। यो तथ्यको कारण केही हदसम्म व्यक्तिपरक लेख हुन सक्छ, तर केहि चीजहरू छैनन् ... र यदि तपाईं अन्डालुसिया भ्रमण गर्ने र त्यहाँ बस्नुपर्ने कारणहरू विश्वास गर्दैनन् भने, म तपाईंलाई के भन्न जाँदैछु, आउनुहोस् र हेर्नुहोस् आफैं
एक एक गरी, मेरा कारणहरू
Andalusia स्पेनी कोस्टहरु मध्ये एक छ जहाँ उनीहरु छन् स्पेनमा धेरै उत्तम समुद्री तटहरू: एट्लान्टिक महासागर र भूमध्यसागरले यसको बालुवा स्नान गर्दछ, पश्चिममा राम्रो र सेतो र पूर्वमा माटो चट्टान। तसर्थ, यो Huelva, मालागा, Cizdiz वरिपरि हिंड्न सजिलो छ (केवल तीन उल्लेख गर्न मात्र) र समुद्री को गन्ध प्राप्त गर्न ... हामी मध्ये ती जो छालहरूमा जन्मिएका थिए, समुद्रको नजिक हुनु भनेको "उद्धार" को जस्तो छ "।
यसको जनताको आनन्दको लागि। किनभने हामी खुला, रमाईलो र संचार चरित्र भएका व्यक्तिहरू हौं। किनकि यदि तपाईं साँघुरो सडकमा हराउनुहुन्छ वा तपाईंले जानुपर्ने विन्दु कहाँ हो भनेर थाहा पाउँदैनौं भने, हामीसँग तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न र मद्दत गर्ने समय हुँदैन ...
उनको लागि राम्रो मौसमजे भए पनि, इमान्दार हुनका लागि, अगस्टको मध्यमा तपाईंसँग धेरै नराम्रो समय हुनेछ: दिउँसो करिब दुई वा चार बजे एकदमै तातो। तर चिन्ता नलिनुहोस्, रातहरू प्राय: शान्त हुन्छन्, विशेष गरी समुद्री तटमा जहाँ त्यहाँ केही समुद्री वायु हुन्छ जुन वातावरणलाई उज्यालो र स्फूर्ति दिन्छ।
हामीसँग धनी संस्कृति छ। किनकि त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जुन यहाँ पारित भएका छन् (फोनिसियनहरू, रोमीहरू, अरबहरू ...) उनीहरूको ऐतिहासिक ट्रेस वर्ष बर्ष छोडे र आधा बर्षमा पनि तपाईले अन्डालुसियाको अन्त्य सम्म यात्रा गर्न पाउनुहुने छैन। शानदार प्रख्यात स्मारक र भवनहरू (कोर्डोबाको मस्जिद, सेभिलमा ला गिराल्डा, ग्रेनाडामा दि अलहम्ब्रा, आदि।)।
किनभने हामीसंग समुन्द्रको विपरित छ: पनि हामीसँग ग्रेनाडाको अद्भुत शहरमा हिमाल र हिउँ छ। यदि तपाईंलाई स्कीइ and र सामान्य हिउँको खेल मनपर्दछ भने, यहाँ अन्डालुसियामा तपाईंले आफूलाई यसबाट वञ्चित गर्नुपर्दैन। तपाईंसँग ग्रेनाडा स्की रिसोर्ट छ, जुन साल पछि यसको आफ्नै बासिन्दाहरू र पर्यटकहरू दुबै भरिन्छ।
किनभने हामीसँग छ जीवित प्रकृतिजस्तै डोआना प्राकृतिक पार्कजहाँ हामी संरक्षित प्रजातिहरू देख्न सक्छौं जस्तै लिन्क्स र अन्य धेरैजस्ता फ्लेमिing्गो र चरा, हिरण, खरायो, सर्प, आदि को एक धेरै प्रकारका।
को राशि राम्रा शहरहरू कि हामीसँग क्षेत्रमा धेरै छ तट जस्तै सिएरा। सबैलाई नाम दिन यस लेखमा खाली ठाउँ हुँदैन, त्यसैले हामी तपाईंलाई अन्डालुसिया भ्रमण गर्न आमन्त्रित गर्दछौं र आफैंलाई यो पत्ता लगाउन।
उनको लागि gastronomy: अन्डालुसियाको प्रत्येक शहरमा यसको ठाउँको खास पकवानहरू छन्, र कुनचाहिँ धनी र स्वाददार छ! तपाईं अन्डालुसिया भ्रमण गर्न सक्नुहुन्न र यसको हेम, यसको स्ट्रबेरी, यसको जैतुनको तेल, यसको एन्कोभिज, यसको क्विनस, यसको झींगा, यसको मदिरा प्रयोग नगरी छोड्न सक्नुहुन्न ... हामीसँग धेरै छन् मिशेलिन ताराहरू हामी मध्ये। के तपाइँ केहि नाम जान्न चाहानुहुन्छ? किस्को गार्सिया, अबंतल, ला कोस्टा, स्किना, र अन्यहरू।
किनभने भएकोमा हामीसँग मरुभूमिको एउटा टुक्रासमेत छ, को शहर मा Almeria, जसले चलचित्र र श्रृंखलाबाट धेरै दृश्यहरूको लागि स्थानको रूपमा काम गरेको छ, जस्तै प्रसिद्ध "थ्रोन्सको खेल" केवल एक र हालको एक लाई उल्लेख गर्न जुन हामी सबैलाई थाहा छ।
यसको शानदार सनसेटहरूको लागि, in लाईट द्वारा Huelva विशेष रूपमा, यो अलि लामो समय सम्म रहन्छ र यसको गुलाबी आकाश जब यो सूर्यास्त हुन थाल्छ आँखाको लागि वास्तविक आनन्द हो। यो किनभने यो मेरो शहर हो, तर यो छैन सब भन्दा सुन्दर सूर्यास्त मैले आफ्नो जीवनमा देखेको छु (अहिलेसम्म)।
तिनीहरूको लागि मेलाहरू र भोजहरू। किनकि सबैजना जस्तै हामी पनि रमाईलो गर्न जान्दछौं र हामीसँग फुर्सतको क्षणहरू छन्। हाम्रा धेरै मेलाहरू, यदि प्रायजसो होइन भने, वसन्त र ग्रीष्मको बीचमा छन्, राम्रो मौसमको कारण। तिनीहरूलाई टाउको लाग्नुहोस् र रमाइलो गर्नुहोस् Andalusian जस्तै।
किनभने फ्लेमेन्को यहाँ जन्मिएको थियो, किनकि यहाँ उसको पालना छ। र हामी सबैलाई थाहा छ, यो एक संगीत शैली हो कि सीमा पार गरेको छ, जापानमा समेत पुग्न। यदि तपाईं फ्लेमेन्को मनपराउँनुहुन्छ र यसको मजा लिन चाहनुहुन्छ भने, हामी ग्रेनाडा वा जेरेज डे ला फ्रोंटेराको छेउछाउको Cádiz सिफारिस गर्दछौं ... त्यहाँ तपाईंले कलाको सास लिन सक्नुहुन्छ।
के हामीले तपाईंलाई Andalusia भ्रमणको लागि अधिक कारणहरू दिनुपर्दछ? तिनीहरू पर्याप्त भन्दा बढी छन् तर तिनीहरू सबै छैनन्! के तपाईं हराइरहेको व्यक्तिहरू आफ्नै लागि पत्ता लगाउन हिम्मत गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » Andalusia को यात्रा र बस्न को लागी कारणहरु
क्युरो प्यूराइट भन्यो
यदि यो ग्रीष्म visitतुमा जानुहोस् वा खर्च गर्नु होला सायद। तर म पहिले देखि नै बाँच्न गएँ र तपाईं घृणाको कारण मर्नुभयो। काममा कुनै गम्भीरता छैन, कुनै पनि कुरामा कुनै गम्भीरता छैन, त्यहाँ धेरै बोतल छ र धेरै जोरोनको लागि उपयुक्त छैन। जोसँग थोरै पैसा छ। युरोपको सबैभन्दा कठिन क्षेत्र पिसा रिपोर्टमा र क्षेत्र चोरहरूले भरिएको भन्दा बढी।
कुरो प्युराइटलाई जवाफ दिनुहोस्
निस्सन्देह, यो धेरै सुन्दर छ, तर व्यक्तिहरू मैत्री मात्र छन् यदि तपाईं पर्यटकको रूपमा जानुहुन्छ। त्यसोभए तिनीहरू सबैभन्दा खराब मान्छेहरू हुन् जसलाई मैले कहिल्यै भेट्टाएको छैन। अपमानजनक, चोरहरू, असभ्य, अल्छी। यदि तपाईं जीवनको गुणवत्ता र शान्ति चाहानुहुन्छ भने म बाँच्न सिफारिस गर्दिन।
कसरी Andalusian लेख छोटो छ तर यो सामान्य हो, यो यति समाप्त हुन सक्दैन। सूर्यास्तहरूको लागि, म Cádiz रुचाउँछु (यसको पहाड र सेतो गाउँहरू पनि हराइरहेका छन्)।
प्रतिक्रियाहरूको बारेमा। Andalusians चोर र अल्छी भन्न को लागी धेरै धेरै मलाई लाग्यो लाग्छ। मैले अन्य क्षेत्रका मानिसहरूसँग काम गरें र म यहाँ भन्दा धेरै चोरहरू भेट्टाएँ, तर त्यहाँबाट तिनीहरू सबै…। सोच्न को लागी लाखौं मानिसहरु जस्तै छन् जुन हामीले एउटा शहर वा शहरमा थाहा पाउँदछौं ताकि यसलाई त्यसमाथि हेर्नुहोस्।
सबै Andalusia सुन्दर छ किनकि म त्यहाँ बाट आएको छु, मलाई लाग्छ आदर र संस्कृतिको ठूलो अभाव Andalusia को बारे मा यी कुरा भन्न को लागी, यहाँ तपाईं बोतल, पार्टीहरु, घटनाहरू, आदि सही गर्नुहुन्छ तर प्राय सबै देशहरू समान वा खराब हो
Nohemi लाई जवाफ दिनुहोस्
अन्डालुसियाका मानिसहरू उनीहरूको उपचार, आनन्द र संचारमा अनुपम छन्। म म्याड्रिडमा जन्मिएको थिएँ, र म मेरागामा मालागामा थोरै सीजनहरू बिताउनको लागि भाग्यमानी थिएँ। त्यो स्वागत शहरले मलाई शान्ति प्रदान गर्‍यो र सबै कुराले हामीलाई खुशी बनायो भने…।
म यसको आकाशको नीलो र यसको पानीको लाड सम्झन्छु ...। मेरो लागि उत्तम ठाउँ अरू केहि हुने थिएन। यदि मैले आफ्नो आँखा बन्द गर्नु पर्छ भने ………
म सेभिलमा months महिनाको लागि थिए, र यो एकदम राम्रो थियो। त्यसोभए समुदायको चारै तिर यात्रा गर्नुहोस् जुन सुन्दर छ। चोरहरू र त्यो मलाई थाहा छैन, मसँग ती समस्याहरू थिएनन्, वास्तवमा मलाई लाग्छ तिनीहरू मसँग डराउँदछन्, यो मेरो उचाईको कारणले हुनेछ। अब मलाई थाहा छ म फेरि त्यहाँ बस्न चाहन्छु, तर कसरी ? मलाई थाहा छैन यदि यो जागिर खोज्न प्रयास गर्नु लायक छ कि छैन, यदि त्यहाँ मेरो लागि स्पेनी माध्यम जस्तो कुनै चीज छैन? यहाँ म हुँ जस्तो मलाई मन पर्दैन, म बसमा फिट छैन, र मलाई लाग्छ म उही ठाउँमा छु र वर्षहरू बित्दै जान्छन्। म इच्छा गर्दछु कि म अन्डालुसियामा जन्मेको हुँ। साधारणतया यसको स्थिति, भूगोल, त्यहाँ एक धेरै महत्त्वपूर्ण ऊर्जा छ। र मौसमको सन्दर्भमा, म १० चिसो महिना भन्दा गर्मी सहन months महिना रुचाउँछु, र धेरै अवसरहरूमा वर्षा र बादलले रोक्दैन। मलाई आशा छ कि यसले मलाई मेरो देशमा बोक्ने भूमिमा चाँडै उत्प्रेरित गर्छ - मेरो अन्डालुसिया।
मिकोलाई जवाफ दिनुहोस्
मे ब्रिजको लागि divers विविध गन्तव्यहरू